प्रचण्डकै सहयोगमा ओली सरकार ढाल्छौं :डा. प्रकाशशरण महत - Tamang Online
काठमाडौं, २१ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेरै छोड्ने घोषणा गरेका छन् । यो ९ महिनामा सरकारले केही पनि काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
उनले ओली सरकारलाई नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा ढाल्ने घोषणा गरेका छन् । प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो डरलाग्दो घोषणा गरेका हुन् ।
यो सरकारका नेताहरु कुरा गर्न जान्ने तर काम गर्न नजान्नेहरु रहेको उनको आरोप छ । यद्धपी उनले आफूहरुले सरकार ढाल्न नचाहेको भएपनि सरकारको आफ्नै क्रियाकलापका कारण ढल्ने अवस्था आएको जिकिर गरे ।
« निर्मलाको घाँटी दबाएर हत्या मैले नै गरेको हो – प्रदीप रावल (Previous News)
(Next News) मेलिना राईको नयाँ गीत ‘लौ गोरी’मा वर्षा राउत र आकाश श्रेष्ठको अभिनय (भिडियो) »